ओलीले प्रतिवेदनमाथि उठाइएका प्रश्नको जवाफ आज दिने
काठमाडौं, वैशाख ३ । नेकपा एमाले केन्द्रीय समितिको बैठकमा आज अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिवेदनमाथि उठेको प्रश्नको जवाफ दिने भएका छन् ।
राजेन्द्र महतोको नजरमा नाकाबन्दी सफल नहुनुको यस्तो रहेछ कारण
काठमाडौं, वैशाख ३ । सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले संयुक्त लोकतान्त्रिक मोर्चाबाट आफ्नो पार्टीलाई अलग्याउन प्रयास भइरहेको खुलासा गरेका छन् ।
मोर्चा फेरि आन्दोलनको तयारीमा
काठमाडौं, वैशाख २ । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले फेरि आन्दोलन गर्ने भन्दै छलफल अघि बढाएको छ । मोर्चाको विहीबार राजधानीमा बसेको बैठकले आन्दोलनको कार्यक्रमअन्र्तगत् नै वैशाख ६ गते काठमाडौंमा बृहत्त अन्तरक्रिया गर्ने निर्णय गरेको छ ।
देउवाद्वारा मधेसी मोर्चालाई वार्तामा आउन आह्वान
काठमाडौं, वैशाख २ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आन्दोलनरत् मधेसी मोर्चालाई वार्ताद्वारा समस्याको समाधान खोज्न आह्वान गरेका छन् । भारतको संविधान निर्माता डा. भीमराव अम्बेडकरको एक सय २५औं जन्मजयन्तीको अवसरमा भारतीय दूतावासले विहीबार राजधानीमा गरेको कार्यक्रममा देउवाले सबै पक्षलाई लचिलो भइ वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न आग्रह गरे ।
संविधान विरोधी शक्तिलाई परास्त गर्ने प्रधानमन्त्रीको दाबी
काठमाडौं, वैशाख २ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान विरोधी शक्तिलाई परास्त गरीछाड्ने बताएका छन् ।
आन्दोलन अब सिंहदरबार केन्द्रित : महतो
काठमाडौं, वैशाख १ । सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले आफूहरुको आन्दोलन अब राजधानी केन्द्रित हुने बताएका छन् । काठमाडौंमा बुधबार हामीसँग कुरा गर्दै उनले आन्दोलन देशभर गर्ने तर त्यसको केन्द्र सिंहदरबार हुने बताए ।
राजनीतिक दलहरुका लागि उतारचढावपूर्ण रह्यो २०७२
काठमाडौं, वैशाख १ । राजनीतिक दलहरुका सन्दर्भमा वर्ष २०७२ उतार चढावमा बित्यो । यो वर्ष संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्व परिवर्तन भयो भने दोस्रो ठूलो दलले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पायो ।
शैक्षिक क्षेत्रको विकासबाट मात्रै परिवर्तन सम्भव : गगन थापा
काठमाडौं, वैशाख १ । नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले शैक्षिक क्षेत्रको विकासबाट मात्रै परिवर्तन सम्भव हुने बताएका छन् ।
वर्ष २०७२ः शक्तिशाली संवैधानिक–राजनीतिक पदमा नेतृत्व परिवर्तन (भिडियो रिपोर्ट)
काठमाडौं, चैत ३० । शक्तिशाली संवैधानिक र राजनीतिक पदहरुमा नयाँ व्यक्तिहरुको पदस्थापनाले वर्ष २०७२ चर्चित रह्यो । नयाँ संविधान जारी भएपछि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुखको निर्वाचन गरिने संवैधानिक व्यवस्था नै गरियो । संविधान जारी भएकै महिना असोज २४ गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई हराउँदै प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए ।
वर्ष २०७२ः अवरोध र चुनौती छिचोल्दै नयाँ संविधान जारी
काठमाडौं, चैत ३० । वि.सं. २०७२ साल नेपालको संवैधानिक इतिहासमा महत्वपूर्ण वर्षकारुपमा सावित हुन पुग्यो । आफैंले आफ्नो संविधान लेख्ने नेपाली जनताको दशकौंदेखिको चाहना पूरा भयो । विभिन्न अवरोध र चुनौती छिचोल्दै संविधानसभा संविधान जारी गर्न सफल भयो । वि.सं. २०७१ को आखिरीमा दलहरुकाबीचमा संविधान जारी गर्ने विषयमा ठूलै विवाद उत्पन्न भएको थियो ।
सरकार परिवर्तनबारे सोच्न पनि सकिदैंन : गच्छदार
विराटनगर, चैत ३० । उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक योजना मन्त्री विजयकुमार गच्छदारले अहिलको सरकार परिवर्तनबारे सोच्न पनि नसकिने बताएका छन् ।
धनकुटाको हिलेबजारमा प्रथम खाना महोत्सव हुने
तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य तीव्र
जिम्बाबेमा तीन हजार कैदी बन्दीलाई आममाफी
राजधानीको बालाजुमा मोटरसाइकल दुर्घटना, चालकको मृत्यु
जिप दुर्घटनामा एक जनाको मृत्यु, नौजना घाइते
मलेसिया पुगेको ६ दिनमै बेपत्ता बनाइएका बमप्रसादलाई उद्धार गरी नेपाल ल्याइयो
माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई आजबाट सुरु, ४ लाख ८५ हजार बढी विद्यार्थी सहभागी